Waxaan Qabaa Dawladu In Ay Intii Taagteeda Ah Ay Ordayso Waana La Garanayaa Intay Qaban Karto” Sh. Cabdilaahi Cali Jawhar | Biyoguurenews.com
Home Wararka Waxaan Qabaa Dawladu In Ay Intii Taagteeda Ah Ay Ordayso Waana La...
Waxaan Qabaa Dawladu In Ay Intii Taagteeda Ah Ay Ordayso Waana La Garanayaa Intay Qaban Karto” Sh. Cabdilaahi Cali Jawhar
Sheekhul beledka gobolka Awdal Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali, ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka Sanaag in ummada Somaliland oo dhami ay ka sugayso in iyagu ay nabadda qaataan.
Waxaanu ugu baaqay beelaha colaadu u dhaxayso in ay ka waantoobaan dagaalka macno darrada ah, isla markaana ay eegaan danta iyo mustaqbalka ubadkooda, sumcadoodda iyo sharftoodda.
Sheekh Cabdillaahi Cali Jawhar, ayaa horaantii sanadkan guddoomiye u ahaa guddigii isugu jirtay culimadda, waxgaradka, madax dhaqameedka iyo aqoon yahanka ee loo xil saaray xalinta colaad beeleedka Ceel Afweyn.
Waxaa uu tilmaamay in bulshadda reer Somaliland ay ka quusteen in mar kale ay heshiisiiyaan beelaha ku dirirsan Ceel Afweyn, maadaama oo marar badan oo nabad la dhex dhigay jebiyeen. Sidaas darteedna ay dadka oo dhami ka niyad jabeen isku dayo kale oo lagu dhex dhexaadinayo beelahaasi.
“Jiidaasi Ceel Afweyn waxay noqotay, waanno iyo Nayl barraar ahba habeen baa lagu seexdaa. Mar kastoo ay nabadi dhacdo waxbaa ka imanaya. Markaa ummadaa waxaan u jeedinayaa, oo aan leeyahay waxaa idinku filan mar haddii cid waliba ay leedahay iyagu ha heshiiyaan, oo ku noqon kari mayno.
Intaasi ha idinku filaato. Ummada oo dhami waxay idinka sugaysaa in aad nabad qaadataan, oo aad eegtaan ubadkiina, sumcadiina iyo sharaftiina”ayuu yidhi sheekh C/laahi Sheekh Cali Jawhar, oo shalay magaaladda Boorama ugu waramay Sahan TV.
Sheekha oo fariin u dirayay beelaha Ceel Afweyn, waxa uu yidhi “Waxaad eegtaan mandaqadda qaniga ah ee uu ILLAAHAY idin dhigay, ee balaadhan, oo Somaliland marka laba qaybood loo kala dhigo qayb ahaan uu degaankiina yahay.
Magac weyn ayaad Somaliland ku leedihiin, magaciinaasi ayaanu hoos u dhicin, oo ayaan faraha la idinku soo wada fiiqin. Haddii intiinaasi aad heshiin waydaan, wadanka oo dhami bur-bur ayay u hor seedaysaa. Taasina wax inoo dan ah ma aha”.
Waxaanu intaas raaciyay “Markaa waxaan idinku waaninayaa, haddii aad reer Ceerigaabo tihiin, waxaad tihiin oo la idiin triyaa halka Somaliland qabaa’ilka degaa ay ka soo aasaasmeen, in aad tihiin. Waxaa loo tiriyaa Sheekh Isaxaaq, in uu halkaa ka soo tafiirmay oo qabrigiisii yahay. Sheekh Samaroon ayaa loo tiriyaa oo qabrigiisii yahay.
Sheekh Ciise ayaa loo tiriyaa oo qabrigiisii yahay. Harti ayaa iyagana loo tiriyaa in ay halkaa ka soo farcameen, oo qabrigiisii yahay”ayuu sheekh C/laahi.
Geesta kale sheekh C/laahi, oo la waydiiyay in sababta ay u soo noq-noqotay colaad beeleedka Ceel Afweyn ay tahay, iyadoon xukuumadu sidii la rabay u fulinin go’aamadii lagu heshiisiiyay beelaha ayaa tilmaamay in dawladu aanay waxba ka hagran fulinta go’aamadii lagu heshiisiiyay beelahaasi.
Hase yeeshee, sababta ugu weyn ee caqabadda ku ah in xukuumadu kaalinteeddii fulineed ka qaadato ayuu ku tilmaamay sheekhu degaanka beelahaasi wada degaan oo aad u baaxad weyn, isla markaana aan loo heli karin ciidan si buuxda gacanta ugu wada dhigo.
Sheekh C/laahi Cali Jawhar, oo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Anigu waxaan u malaynayaa dawladu taagteedda iyo awoodeedu intay tahay, in ay Ordayso. Laakiin, waa la garanayaa dawladu waxay qaban karto iyo wixii aanay qaban karin.
Degaanka baaxadiisu intay tahay waa la arkayaa. Looma heli karo ciidan badan oo dawladu awoodeedda ay ku gacanta ku wada qabato.
Laakiin, waxaan odhan lahaa dawladu xoogga ha saarto culimadda gobolka Sanaag iyo baayac-mushteriga waaweyn ee gobolkaasi iyo salaadiinta iyo garraadda gobolkaa Sanaag, awoodda ha saarto”.
Previous articleNabadgalyadu jamhuuriyada Somaliland kuma joogto ciyaar iyo wax lagu ciyaaro ama uu ku kaftamo ama uu xukuumad ku lux-luxdo raga Ku kaftamayana waxan leeyay, Ex Wasiir cabdilaahi Cukuse
Next articleCiise Tarabuun: Soomaaliya oo difaacday siideynta nin Kenya ay dooneyso oo Al-Shabaab ka tirsaa